ကွယ်လွန်ပြီးသောဖခင်ကြီး ဦးမေတ္တာအတွက်အလှူလေးပြုလုပ်ရင်း ခံစားချက်တွေကိုပြောပြလာတဲ့ မေတ္တာမြင့်မြတ်ဟိန်း – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို နှစ်အတော်ကြာ ပိုင်ဆိုင်ရယူထားတဲ့ လူရွှင်တော် ဦးမေတ္တာကတော့ မကြာခင်က ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးမေတ္တာရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အခုထိ အရမ်းဝမ်းနည်းနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါကြောင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေကလည်း ဦးမေတ္တာအတွက် ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိတာ ဒီကနေ့အထိပါပဲ။ ယနေ့ ဝါခေါင် လပြည့်နေ့မှာလည်း ဖခင်ကြီး ကို ရည်စူးပြီး ကောင်းမှုအလှူတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်..။
အလှူပုံရိပ်တွေနဲ့အတူ ဖခင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြထားပါသေးတယ်။ ” ယနေ့ ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ မှာ လှူဖြစ်တဲ့ မိသားစုအလှူတော်လေး…. ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့ ခရီးကို ဖေဖေထွက်သွားတာ ဒီနေ့နဲ့ဆို ၂၃ရက်တောင်ရှိသွားပီ ကိုမေတ္တာလို့ အဖေ့ကို ခေါ်ကြတဲ့ နာမည်လေးအတိုင်း ညီလေးမေတ္တာရေ သားလေးမေတ္တာရေဆိုပီး အဖေ့ကိုချစ်ကြတဲ့ မိသားစုပရိသတ်တွေက စာလေးတွေပို့ပီး စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ အားမငယ်ဖို့ အားပေးစကားတွေလာပြောကြတယ် အဖေ အဖေရှိနေသလို ခံစားရတယ် သတိရတယ်ဖေဖေရယ်……အလုပ်တွေပြန်လုပ်ရတဲ့အချိန် ပွဲတွေပြန်ကကြတဲ့အချိန်ကျ စင်ပေါ်တက်တိုင်း အဖေ့ကိုသားမျှော်နေမယ်နော် ချစ်တယ်…..ဖေဖေ ” ဟုရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဖတ်ရှူ့ပေးကြတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
ခဈြလှစှာသော ပရိတျသတျကွီးရေ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျမှုကို နှဈအတျောကွာ ပိုငျဆိုငျရယူထားတဲ့ လူရှငျတျော ဦးမတ်ေတာကတော့ မကွာခငျက ကိုဗဈရောဂါနဲ့ ကှယျလှနျးသှားတာဖွဈပါတယျ။ ဦးမတ်ေတာရဲ့မိသားစုဝငျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ အခုထိ အရမျးဝမျးနညျးနကွေဆဲပဲဖွဈပါတယျ..။
ဒါကွောငျ့ ကနျြရဈသူမိသားစုဝငျတှကေလညျး ဦးမတ်ေတာအတှကျ ကောငျးမှုကုသိုလျမြား ပွုလုပျပေးလကျြရှိတာ ဒီကနအေ့ထိပါပဲ။ ယနေ့ ဝါခေါငျ လပွညျ့နမှေ့ာလညျး ဖခငျကွီး ကို ရညျစူးပွီး ကောငျးမှုအလှူတှေ ပွုလုပျပေးခဲ့ပွနျပါတယျ..။
အလှူပုံရိပျတှနေဲ့အတူ ဖခငျနဲ့ ပတျသကျပွီး ရငျထဲက ခံစားခကျြတှကေို ရငျဖှငျ့ပွောပွထားပါသေးတယျ။ ” ယနေ့ ဝါခေါငျလပွညျ့နေ့ မှာ လှူဖွဈတဲ့ မိသားစုအလှူတျောလေး…. ပွနျမလာနိုငျတော့တဲ့ ခရီးကို ဖဖေထှေကျသှားတာ ဒီနနေဲ့ဆို ၂၃ရကျတောငျရှိသှားပီ ကိုမတ်ေတာလို့ အဖကေို့ ချေါကွတဲ့ နာမညျလေးအတိုငျး ညီလေးမတ်ေတာရေ သားလေးမတ်ေတာရဆေိုပီး အဖကေို့ခဈြကွတဲ့ မိသားစုပရိသတျတှကေ စာလေးတှပေို့ပီး စိတျဓာတျမကဖြို့ အားမငယျဖို့ အားပေးစကားတှလောပွောကွတယျ အဖေ အဖရှေိနသေလို ခံစားရတယျ သတိရတယျဖဖေရေယျ……အလုပျတှပွေနျလုပျရတဲ့အခြိနျ ပှဲတှပွေနျကကွတဲ့အခြိနျကြ စငျပျေါတကျတိုငျး အဖကေို့သားမြှျောနမေယျနျော ခဈြတယျ…..ဖဖေေ ” ဟုရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ဖတျရှူ့ပေးကွတဲ့ပရိတျသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျဆိုငျပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော..။
ပြိုလဲနေစဉ်ပြသနာတွေအများကြီးကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ကာအားတင်းနေထိုင်ခဲ့ရပုံကို ပြောပြလာတဲ့ ရဲရင့်အောင်